Erey guud oo loogu talagalay diyaargarowga ama aaladaha si waxtar leh u nuugaya maaddooyinka gaaska qaarkood, ee loo isticmaalo helitaanka ama dayactirka faakiyuumka, iyo nadiifinta gaasaska.
Magaca Shiinaha: zirconium aluminium aluminium ah, zirconium aluminium 16 getter Ha ugu yeedhin: Wakiil dejiye ah
Isticmaal: Waxaa loo adeegsadaa helitaanka iyo dayactirka faaruqinta, iwm
Birta Zirconium waa macaan bir ah oo ka kooban zirconium iyo bir, silikoon, aluminium iyo walxo kale. Birta loo yaqaan 'zirconium iron' ee loo adeegsado sameynta bir-sameynta waa zirconium ferrosilicon, oo ay ku jiraan Zr15% ~ 45%, Si30% ~ 65%. Badeecada ay soo saartay habka aluminothermic waxaa loo yaqaan 'zirconium iron' maxaa yeelay waxay ka kooban tahay aluminium, oo ay ku jirto Zr> 15%.
Daawaha aluminium ee Cobalt
CAS lambar 11114-55-9
Miisaanka maadada ee 85.9147
Koodhka gaadiidka ee badeecadaha halista ah: UN3089
Sida nooc ka mid ah heerkulka sare iyo sheyga u adkaysta, aluminium chromium daawaha budada CrAl ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa dusha sare, dahaadhka birta iyo qaybaha kale ee isku dhafka heerkulka sare, dhoobada, iwm.
Daawada aluminium ee 'Vanadium' waa nooc ka mid ah walxaha horumarsan ee horumarsan oo si ballaaran loogu adeegsado aagga hawada. Daawada aluminium ee 'Vanadium' waa daawaha dhexe oo leh barta ugu yar ee dhalaalida ee 1600 ℃ (oo ay ku jiraan V40%). Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida walxaha lagu daro aluminium ee titanium, superalloy iyo qaar ka mid ah alloysyada gaarka ah.
Daawada Titanium waa bir qalin-cad, oo leh sifooyin badan oo aad u fiican. 4.54g / cm3, titanium-ka 43% wuu ka fudud yahay birta wax yarna wuu ka culus yahay magnesium, birta caanka ah ee caanka ah. Awoodda farsamadu waxay la mid tahay birta, waxay labanlaab ka adag tahay aluminium iyo shan jeer ka xoog badan tahay magnesium. Titanium waa heerkul sarreeya oo u adkaysta, barta dhalaalaya 1942K, oo ka sarreeya dahabka ku dhowaad 1000K, oo ka sarreeya birta ku dhow 500K.
Daawaha loo yaqaan 'Chromium-tungsten alloy' wuxuu leeyahay kaarboon yar iyo qallafsanaan hoose, laakiin ka dib markii carburizing iyo deminta, adkaanshaha dusha sare iyo xasilloonida kuleylka ayaa si weyn u kordha, guryaha farsamooyinka dhameystiran ayaa wanaagsan, iyo saameyn adag oo adag ayaa la heli karaa. Waxyaabaha loo yaqaan 'Cr-W alloy' ayaa leh xasaasiyad sare iyo iska caabin liidata oo hoos timaada xaaladaha xirashada xaaqan.
Zirconium - Daawaha naxaasta ahi waa waxyaabaha ugu fiican xulashada xiriirka wareegga sababtoo ah habsami u socodka iyo kuleylka kuleylka. Haddii xiriiriyaha furaha uu jaro wareegga, qaanso-soo-baxa ayaa culeys badan saaraya maaddada, taas oo ah waxa heerkulka sare ee chromium sameeyo.
Nooc cusub oo ah keydinta haydrojiin iyo wax gubaya, budada Zr30Ni70 ayaa ah tan labaad oo kaliya budada Zr waxaana si weyn loogu isticmaalaa warshadaha militariga, macdanta iyo alaabada elektarooniga ah. ,